Mmoa a Yɛde Ma Ahenni No​—Adan a Yesisi Som Wom ne Mmoa a Yɛde Ma Afoforo | Onyankopɔn Ahenni
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Benkum: Nneɛma a wɔde fi Switzerland abɛkyɛ yɛn nuanom a wɔwɔ Germany, 1946; nifa: Ahenni Asa a wɔresan asi bere a ɛpo twiw faa asase so wɔ Japan, 2011
Mmoa a Yɛde Ma Ahenni No​—Adan a Yesisi Som Wom ne Mmoa a Yɛde Ma Afoforo
ƐDA bi a wokɔɔ mo Ahenni Asa so no, na ɛte sɛ nea woayera. W’ani gye saa ɔdan no ho paa. Wokae paa sɛ woka ho bi na wosii ɔdan no mfe bi a atwam. Nanso, anigye a woanya wɔ Ahenni Asa no ho seesei no aboro so koraa, efisɛ saa bere yi de wɔde hɔ ayɛ baabi a nkurɔfo a atoyerɛnkyɛm ato wɔn kogye mmoa. Ahum bi a etui nnansa yi maa nsu yiri sɛee nneɛma pii wɔ mo mpɔtam hɔ, na Baa Boayikuw no yɛɛ nhyehyɛe ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a atoyerɛnkyɛm ato wɔn no benya nnuan, ntade, nsu pa, ne nneɛma foforo. Wɔahyehyɛ nneɛma a afoforo de abɛkyɛ no fɛfɛɛfɛ. Anuanom reba hɔ, wɔn nsa ka nea wohia, na wɔn mu pii nusu adan wɔn serew ma wɔrepopa wɔn anim.
Yesu kae sɛ ade titiriw a wɔde behu ne nkurɔfo ne sɛ wɔbɛdodɔ wɔn ho. ( Yoh. 13:​34, 35) Wɔ saa ɔfã yi mu no, yebesusuw sɛnea Yehowa Adansefo da Kristofo dɔ adi bere a wɔresi adan ne bere a wɔde mmoa rema wɔn a atoyerɛnkyɛm ato wɔn no ho. Ɔdɔ a ɛte saa a wɔda no adi no nyinaa yɛ adanse a edi mũ a ɛkyerɛ sɛ yɛte Yesu Ahenni nniso ase.
Ɛhe na wonya sika fi? Adwuma bɛn na wɔde yɛ?
Adan a yɛsom wɔ mu no hyɛ Onyankopɔn anuonyam, nanso biribi foforo wɔ hɔ a ɛho hia no kɛse.
Ɔsom Adwuma a Yɛde Boa Afoforo
Yɛyɛ dɛn hu sɛ adwuma a yɛde boa wɔn a atoyerɛnkyɛm ato wɔn no ka ɔsom kronn a yɛde ma Yehowa no ho?